तुर्कमेनिस्तान कोभिड-१९ बाट अहिलेसम्म कसरी मुक्त छ ? | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ विश्व तुर्कमेनिस्तान कोभिड-१९ बाट अहिलेसम्म कसरी मुक्त छ ?
तर, के सेन्सरसीपका लागि चर्चित सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई विश्वास गर्न सकिन्छ? तुर्कमेनिस्तान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबारे अध्ययन गरिरहेका लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एण्ड ट्रोपिकल मेडिसिनका प्रोफेसर मार्टिन म्याकीका अनुसार तुर्क्मिनिस्तानले आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्यबारे सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबारे भरोसा गर्न सकिँदैन ।
मार्टिनले भनिन्, ‘गत दशकमा दाबी गरेका थिए कि त्यहाँ एक जना पनि एचआईभीरएड्सबाट संक्रमित बिरामी छैनन् । यो तथ्यांक पनि विश्वसनीय र सह्राना गर्न नसकिने हो।
यद्यपि, तुकर्मे्निया प्रशासन कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ र संक्रमित मानिसहरूलाई खोजिरहेको छ ।
साथै, सबै अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानहरू राजधानीको सट्टा तुर्कमेनाबादमा डाइभर्ट गरिएको थियो । जुन ठाउँलाई एक क्वारेन्टाइन जोनको रुपमा विकास गरिएको थियो ।
Previous articleबलिउड नायिका जोया मोरानीमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि
Next articleश्रीमतीलाई साइकलमा राखेर ७ सय किलोमिटर यात्रा गर्ने यी मजदुरको कथा